प्रचण्डलाई ओलीले भने: अदालतले गरिदिने हो पार्टी एकता? पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो? - हिमाल दैनिक
प्रचण्डलाई ओलीले भने: अदालतले गरिदिने हो पार्टी एकता? पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो?
काठमाडौँ १७ चैत्र २०७७, मंगलवार १७:५२
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबको २३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा गएर एमाले र माओवादी एक नहुने समेत बताए । पार्टी फुटको बिषयमा अदालत नभइ निर्वाचन आयोग जान पनि उनले सुझाव दिए ।
उनले भने ‘निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गर्न कसले रोकेको छ? अनि अदालतमा पार्टी एउटै गरिपाऊँ भन्ने? अदालतले गरिदिने हो पार्टी एकता? पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो?’
ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम गर्दा हटाउन खोजेको आरोप लगाए । विकास र जनताका पक्षमा राम्रा काम गरेकाले विपक्षी आत्तिएको र हटाउन खोजेको उहाको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रुपमा संकट परेकोलाई देशमा संकट पर्यो भन्न नहुने धारणा राखे ।
ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकट नपरेको जिकिर गर्दै चुनाव भएर संकट पर्ने हो भने २० महिनापछि देशमा संकट पर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षबाट वृद्धभत्ता बढ्ने जानकारी दिए ।
अघिल्लो‘भिजिबिलिटी’ कम हुँदा सयौँ उडान प्रभावित
पछिल्लोराष्ट्रपतिद्वारा भारतीय राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य लाभको कामना